राष्ट्रिय गाैरवका आयोजना निर्माणमा समस्या — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > राष्ट्रिय गाैरवका आयोजना निर्माणमा समस्या
राष्ट्रिय गाैरवका आयोजना निर्माणमा समस्या
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने, तोकिएको लागतमा पुरा नहुने र गुणस्तरीय रुपमा निर्माण नहुने गरेको समस्या देखिएको छ । वर्षौदेखि निर्माण शुरु भएका गौरवका आयोजनाहरु कहिले स्रोत अभाव त कहिले अन्य स्थानीय समस्याहरुका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल आयोजनाहरु तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा काम हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । गौरवका आयोजनाहरु जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा हुन नसकेकाले यसमा गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणमा अहिले वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न मन्त्राललयका सचिवहरुले स्रोतको समस्याका कारण गौरवका आयोजनाहरु निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिवहरुले लकडाउनका कारण केही आयोजनाहरु प्रभावित भएपनि अधिकांश आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विभिन्न विमानस्थलहरु निर्माणका काम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।
निजगढ विमानस्थलमा भौतिक प्रगति उल्लेख नभएपनि अदालतको फैसला आएपनि बाँकी प्रकृया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । पशुपति गुरु योजना अनुसार ८४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र लुम्बिनी क्षेत्र विकासको काम ८५ प्रतिशत सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुष्पलाल मध्यपहाडी र लोकमार्गमा ५३ प्रतिशत काम भएको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा १ सय ११ किलोमिटर गरी अहिलेसम्म आधा भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको उहाँले बताउनुभयो । हुलाकी सडकको ५५ प्रतिशत कम सम्पन्न भएको छ । गौरवका आयोजना निर्माणमा स्रोतको समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ७१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । मुख्य सुरुङका लागि परामर्शदाता विज्ञहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अहिलेसम्म ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख बराबरको मुआब्जा वितरण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कुल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये अहिलेसम्म ४७ हजार ३ सय ३९ रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको उहाँले तबाउनुभयो । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पश्चिम तर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहर तयार भइसकेको छ । गत वर्ष आयोजनाबाट १६ हजार हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुगेको छ । बाँकेमा मात्रै ९० प्रतिशत क्षेत्रमा सिक्टा सिँचाईको पानीले रोपाई गरिएको छ । रानी जमरा गुलरिया आयोजनामा ४८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
२०७७ साउन १५ गते १६:०७ मा प्रकाशित
डा. पुष्पराज कँडेलराष्ट्रिय गौरवका आयोजना
एडीबीसँग करिब ६ अर्ब सहयोग माग्‍ने
नेपाल बैंकका शाखा प्रवन्धक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा, ५४ लाख ८४ हजार माग दाबी
गहना बनाउने कि ? आज फेरि ६ सयले घट्यो सुन !
अर्घाखाँचीमा जनता बैंकको स्वास्थ्य शिविर, तीन सयले स्वास्थ्य परिक्षण गराए
तिहार अघि नै आउने भयो तीन कम्पनीको लाभांश रकम बैंक खातामा
नाका नखोले प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण चीनबाट : थापा